Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Ntọala Sandals na-enyere ndị ọrụ ahụike ụgwọ ụgwọ
Akụkọ Antigua & Barbuda • Akụkọ Bahamas Breaking • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Grenada na -agbasa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • News • Iwughachi • Resorts • Safety • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Sandals Foundation nyere ndị dọkịta na ndị nọọsụ ezumike ezumike na-emeso ndị ọrịa COVID-19 na ICU.
Ka ụlọ ọgwụ ọha na eze n'ofe agwaetiti ahụ na-ewusi usoro nkwado ha iji zaghachi ndị ọrịa COVID-19, ụlọ ọgwụ St. Ann's Bay Regional Hospital ejirila ya Akpụkpọ ụkwụ Sandals ya na ebe ndi mmadu na-adighi nma na ndi mmadu noo dika ndi ezumike na ndi nlekota ndi mmadu ga-abia na Intensive Care Unit (ICU).
Ulo oru a, nke ruru ihe dika JMD $ 386,000 bu Sandals Foundation kwadebere ya dika akuku nke nkwado enyemaka COVID-19 nke ulo oru ndi United States, Tito Handmade Vodka. Ogwe aka enyemaka nke ụlọ ọrụ vodka, Lovehụnanya, Tito, enyela ngụkọta nke $ 25,000 US iji kwado ndị ọrụ ile ọbịa nke agwaetiti ahụ n'obodo ndị dabere na njem nleta metụtara ọrịa ahụ.
Annlọ Ọgwụ St Ann's Bay bụ isi ụlọ ọrụ ọgwụgwọ COVID-19 maka ndị nọ na parish nke St. Ann, Portland na St. Mary. Thelọ ezumike ahụ nwere ebe a na-ehi ụra nke eji ejima, akwa oghere na reclin atọ na telivishọn na oghere iri nri na microwave, ketulu elektrik, friji na tebụl iri anọ.
N’ikwu okwu na mmemme inyefe n’aka na Fraịdee, Mee 8, 2020, Dennis Morgan, onye isi ndị isi na North East Regional Health Authority kwuru na onyinye a “dị mkpa n’ịgba ndị ọrụ anyị na-arụ n’ihu n’ihu ndị na-achụ ndụ ha kwa ụbọchị iji lekọta mmadụ anya. nje virus ahụ metụtara. ”
Heidi Clarke, Executive Director na Sandals Foundation gosipụtara ịdị n'otu na ndị ọrụ niile bụ ndị na-ebute ụzọ n'ịlụso ọrịa a ọgụ.
“Anyị nwere obi ekele maka ọrụ nke ndị ọrụ niile na-arụ ọrụ n’ihu na-arụ iji zọpụta ndụ ma weta mmesi obi ike nye ezinụlọ ndị metụtara ya. Anyị nwere olile anya na ụlọ ezumike a ga - enyere ndị ọrụ ụlọ ọgwụ aka ịchọta nkasi obi na oghere a ezubere iji nyere ha aka izu ike, weghachite etiti ma kwụghachi ụgwọ, “ka o kwuru.
Sandals Foundation anọwo na-azaghachi ọtụtụ mkpa mmekọrịta ọha na eze kamgbe ọrịa ahụ rutere n'ụsọ agwaetiti ahụ.
“Anyị na-aga n’ihu ileba anya maka mpaghara iji kwado ndị bi na Jamaica na agwaetiti ndị ọzọ dị na Caribbean ma soro ndị gọọmentị, ndị ọrụ na-abụghị ndị gọọmentị na ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ iji nye ndị agadi na ndị nwere nsogbu kachasị mkpa. Anyị maara na mmechi nke ụlọ ọrụ ndị njem emeela ka ndụ siere ọtụtụ ezinụlọ ike, yabụ ga-achọsi ike inyere ndị obodo aka na-adabere na njem iji dịrị ndụ, “Clarke kwuru.
Ihe gbasara akpụkpọ ụkwụ.